BBC Somali - Cayaaraha - Faalada Cayaarta Fulham iyo Swansea
Faalada Cayaarta Fulham iyo Swansea
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Maarso, 2012, 17:45 GMT 20:45 SGA
17:00 Intaas ha inoo joogta maanta oo Sabti ah. Tan iyo kullan dambe.
17:00 Swansea waxay sadex iyo eber kaga badisay kooxda Fulham.
16:59 Man U ayaa 67 wali ku hogaaminaysa, Man City ayaa hal dhibic ka hoosaysa, Tottenham 53 ayay leedahay, iyadoo Arsenal ay ku jirto booska afaraad 52.
16:57 Cayaaraha maanta waxba kama badalayaan kala saraynta qaybta hore ee tartanka.
16:56 West Brom waxay barbarro la gashay kooxda Wigan oo ugu hoosaysa labaatanka koox ee ka qaybgalaya tartanka, iyadoo 22 dhibcood si la mid ah QPR iyo Wolves, Boltonna wax badan kama foga oo 23 ayay leedahay.
16:54 Swansea waxay yeelatay 39 dhibcood, waxay laba dhibcood ka horaysaa kooxaha Sunderland iyo Everton, iyadoo 3 ka horeysa mid walba Fulham, West Brom, Norwich iyo Stoke.
16:52 Swansea ayaa 0-3 uga adkaatay kooxda Fulham oo garoonkeeda ay ugu tagtay.
16:52 Cayaarta ayaa dhamaatay.
16:50 Swansea sadex cayaaryahan ayay mar kaliyay badashay.
16:49 Kooxda Swansea waxay ka socotaa magaalo ku taalla gobolka Wales ee Britain. Wales sidii dal gooni ah ayay uga qaybgashaa cayaaraha adduunka si la mid ah Scotland, England iyo Northern Ireland.
16:48 Kubad si qurux badan loo soo dhisay oo gudaha diilinta 18-aad la isugu dhiidhiibay ayaa ugu dambaynta Scott Sinclair ee Swansea uu dusha birta goolka mariyay.
16:48 Axmed Cabdinuur waxaa uu leeyahay Fulham maanta waa lagu barbartay.
16:48 Swansea 28 cayaarood, waxay badisay toban, sagaal barbarro ayay gashay, sagaalna waa laga badiyay.
16:47 Haysashad akubadda ayaa noqotay 60 boqolkiiba oo kubadda ay lugta ugu jirtay kooxda Swansea.
16:46 Swansea oo weerar kale qaaday ayaa bannaanka ay uga baxday.
16:44 Mar kale ayaa Pogrebniak uu laad gudaha sideed iyo tobanka ka ganay balse dusha mariyay.
16:43 Cayaartu wali 0-3 looga horeeyo kooxda Fulham oo Swansea ayaa ku badinaysa.
16:42 Cayaaryahan Dempsey ayaa kubad uu ka laaday bannaanka diilinta sideed iyo tobanaad wuxuu ku dhuftay birta.
16:40 Cayaaryahanka Pogrebniak ee Fulham ayaa bannaanka mariyay kubadda isagoo dhinaca goolka u laaday balse kuma toosnayn goolka.
16:39 Wali waxaad moodaa in Swansea goolal lagu leeyahay oo iyada ayaa inta badan kubadda haysata.
16:38 Kooxda Swansea ayaa 3 gool ku hogaaminaysa Fulham oo aan ilaa hadda waxba dhalin.
16:36 Waxay ahayd kubad uu si qaldan u baasay Senderos, waxaa la maray oo goolka u dabamariyay goolyahye Schwarzer cayaaryahanka Allen.
16:36 Goolkii sadexaad ayay dhalisay Swansea.
16:32 Duff wuxuu ku dooday in ay koone tahay balse garsooraha yiri waa gool ka laad oo Swansea ayaa soo cayaargalinaysa kubadda.
16:32 Fulham oo weerar culus qaaday ayaa cayaaryahan Duff uu ku laaday kubadda balse bannaanka ayuu ka qabtay goolhaye Vorm.
16:30 Mohamed Diara ayaa la badala, waxaa soo galay Murphy.
16:30 Fulham isku day kale ayay wadaa sidii ay labada gool isaga soo gudi lahayd.
16:30 Swansea uma muuqato koox sanadkan ku soo biirtay tartanka, marka aad eegto cayaarta ay la soo shirtagtay.
16:28 Swansea waxay yeelanaysa 39 dhibcood oo Liverpool oo 7-aad ku jirta ayaa ka horaynaysa 3 dhibcood. Waa cayaartan ay ka badiso Fulham oo sida ay ku dhamaato.
16:27 Fulham oo gurigeeda lagu cayaarayo laba gool ayaa lagu leeyahay.
16:25 Waxay cayaartu noqotay 0-2 ay ku hogaaminayso kooxda Swansea.
16:25 Sinclair ay mar kale dhigay kubadda noqotay goolka labaad iyadoo uu shabaqa ku hubsday isla cayaaryahankii dhaliyay goolka hore Sigurdsson
16:25 Gool labaad ayay dhalisay Swansea.
16:21 Diara marka kale ayuu garoonka ka baxay si looga daweeyo madaxa oo uu wali dhiig ka socdo.
16:20 Deysane oo ka faaloonaya cayaarta waxay la tahay in aysan soo marin cayaartan ka wanaagsan daawashadeeda tan iyo markii horyaalka sanadkan uu bilowday.
16:19 Swansea dardar hor leh ayay galisay cayaarta oo dhowr daqiiqo oo is xiga kubadda lugtooda kama bixin.
16:17 Duff oo goor dhow badal ku soo galay ayaa kubadda uu dhexda ka laaday dulmariyay goolka kooxda Swansea.
16:16 Fulham 28 kulan oo ay dheeshay. Waxay badisay 9 kulan. 9-na barbarro ayay gashay, waxaana laga badiyay 10 cayaarood.
16:15 Cayaartu waa weerar iyo weerar celis.
16:13 Swansea kubad qurux badan ayay cayaaraysaa oo kubad isku dhiibdhiibkoodu wuu ka wanaagsan yahay
16:12 Cayaartu waxay maraysaa 1-0 ay Swansea ku hogaaminayso.
16:11 Fulham weerar ayay ku haysaa goosha Swansea.
16:10 Kubad ay FUlham keentay goolka afkiisa ayaa diaaca Swansea dibedda isaga saaray.
16:07 Weerar ay Fulham qaaday, ayaa bannaanka uu ula baxay Diara oo dhaawac madaxa ka gaaray markii uu tabeelaha ku dirsaday madaxa.
16:05 Fulham dardar kii hore dhaama ayay ku soo galeen, balse su'aashu waa siday u sii wadi doonaan?
16:04 Cayaarta dib ayay u bilaabatay oo Fulham ayaa isku dhiibatay.
16:04 Hadda ayay cayaartoydu dib ugu soo laabanayaan garoonka Craven Cottage.
16:03 Wigan iyo Wesbrom oo iyaguna cayaaraha 0-0 ayay isla dhaafi la'yihiin.
16:03 Fulham meesha ugu saraysay ee abid ay ka gaarto horyaalka Ingiriiska wuxuu ahaa sanadkii 2009 oo ay ku dhamaysatay booska todobaad.
16:00 Swansea heerkii ugu sareeyay ee ay ka gaarto tartamada kubadda cagta, gaar ahaan Premier League Waxaa ay ahayd booska lixaad oo ay gashay sanadkii 1982.
15:58 Fulham ayaa culayska ku sii kordhayaa iyadoo hadda gool lagu leeyahay. Bilowgii cayaartan ka hor isku dhibco ayay ahaayeen labada koox.
15:54 Markii ugu dambaysay ee Swansea garoonka Fulham ku badiso waxay ahayd 23-kii February sanadkii 1980.
15:53 Tartamada kale ee labadan koox ku kulmeen afartii u dambaysay Fulham ayaa ku adkaatay, waxaa Swansea laga dhaliyay ilaa 14 gool isku darka.
15:48 Cayaar xiise badan ayay soo bandhigtay kooxda Swansea, waxayna u muuqataa in ay aad uga gacansarayso Fulham oo garoonkeeda lagu cayaarayo.
15:47 Garsooraha ayaa ku dhuftay seeriga dhamaadka qaybta hore ee cayaarta.
15:46 Koone ay heshay Fulham waxaa mada ku bixiyay isagoo is leh dhali cayaaryahanka Fulham, Dempsey.
15:45 Fulham dardar ayay isgalisay oo hadda cayaarta haysashadeeda waxay isku badashay 47% Fulham iyo 53% Swansea.
15:44 Swansea ayaa gool iyo waxba ku hogaaminaysaa cayaarta.
15:43 Qaybtii hore ayaa dhamaad ku dhow.
15:42 Swansea hadii ay sadexda dhibcood la tagto waxay galaysaa booska sideedaad oo waxay ku xigsanaysaa kooxda Liverpool oo 7 ku jirtay dhinaca kala horaynta.
15:42 Labadan koox horay isku dhibco ayay ahaayeen.
15:42 Kubad haysashada waxaa hadda horeeya kooxda Swansea oo marti u ah Fulham oo boqolkiiba 54 lugteeda ku haysay kubadda.
15:40 Weeraro rogaal celis ah oo Fulham ay qaaday waxba kuma keenin.
15:37 Kubadda uu goolka hortiisa soo dhigay cayaaryahan Sinclair waxaa shabaqa u dabamariyay goolhaye Schwarzer, cayaaryahanka Gylfi Sigurdsson.
15:35 Gool ayay dhalisay kooxda Swansea.
15:35 Laad toos ah ayay heshay Swansea kadib markii qalad lagu galay Cayaaryahan Sinclair.
15:32 Goolhaye Schwarzer ee Fulham ayaa laba fursadood oo is xiga ka hor istaagay Swansea.
15:31 Dhowr iyo sodon daqiiqo ayay socotaa cayaarta.
15:30 Fulham weerar ay qaaday waxaa ugu dambaysay kubadda gacanta ku dhigay goolhaye Vorm.
15:29 Swansea ayaa iyaduna weerar culus ku qaaday Fulham, balse dibedda ayay isaga saartay kubadda, oo goolka geeskiisa marsiisay.
15:28 Fusad qaali ah ayay heshay Fulham oo goolka afkiisa ayaa kubadda ay keeneen cayaartoyda Fulham, balse Offside ayay noqotay.
15:27 Cayaaryahanka Dempsey ee Fulham ayaa goolka toogtay balse dusha ayuu mariyay kubadda.
15:26 Konton iyo lix boqolkiiba waxaa kubadda haysatay kooxda Fulham halka 43 boqolkiiba ay tahay inta Swansea kubadda ay lugtooda ku jirtay.
15:24 Laad toos ah kadib ayaa kubadda waxaa dusha sare ka qabtay goolhayaha Fulham Schwarzer.
15:23 Sinclair ayaa qalad lagu galay, waxaa kubadda hadda lagu laadayaa kooxda Fulham.
15:22 Swansea ayaa hadda diilinta goolka Fulham ku wareegaysa, balse Fulham ayaa ka daftay ilaa ay ku dhowaadaan dhinaca bidix ee goolka Swansea.
15:21 Fulham waxay ku cayaaraysa dhar cad-cad, iyadoo Swansea ay gashan tahay dhar midabkoodu oranji yahay.
15:20 Cayaaryahanka Sinclair ee Swansea oo fursad ka faa'iidaysi ah helay ayaa kubadda iska qaxaariyay oo kubaddaayuu iska fogeeyay.
15:20 Fulham way mari la'dahay Swansea.
15:19 Fulham ayaa hadda weerar ku heysay Swansea oo ku wareegaysa diilinta 18-aad ee kooxda Swansea.
15:16 Fulham, cayaaryahanka Johnson ayaa offside laga dhigay.
15:15 Fulham ayaa hadda haysashada kubadda horaysa oo 55 boqolkiiba haysatay kubadda.
15:13 Fulham ayaa koone heshay kadib markii ay iska soo saareen Swansea waxaa laad ku kiciyay Riise, isagoo dusha goolka mariyay.
15:12 Fulham ayaa weerar ku jirtay hadda.
15:11 Waxaad mooddaa in Swansea ay hadda cayaar wanaagsan tahay.
15:10 Swansea fursaddii ugu wanaagsanayd ayaa soo martay, inkastoo cabaar kadib uu garsooruhu sheegay in ay Offside tahay.
15:10 Swansea lama dhayalsan karo inkastoo sanadkan ay ku soo biirtay horyaalka Premier League.
15:09 Swansea oo weerar qaaday waxaa ka qabtay goolhayaha Fulham.
15:08 Fursado kookooban oo labada kooxba heleen lagama faa'iidaysan.
15:07 Ilaa hadda waa isku dheeli tiran tahay cayaartu.
1506 Kubaddu hadda dhexda garoonka ayay maraysaa.
15:05 Sinclair ayaa kubad difaaca Fulham si qaldan ugu dhiibay dul mariyay goolka Fulham.
15:04 Swansea oo weerar qaaday ayaa kubaddu ka hor martay.
15:04 Mar kale ayaa goolhayuhu badbaadiyay kubad lagu soo laaday oo fursad wanaagsan u ahayd kooxda Fulham.
15:03 Cayaaryahanka Demsey ayaa laad xoog leh ku sii daayay goolka kooxda Swansea balse waxaa kubadda bixiyay goolhayaha kooxda Swansea, iyadoo Koone noqotay.
15:02 Waxaa laadatay kooxda Swansea oo markiiba in yar kadib ula tagtay goolhayaha kooxda Fulham.
15:01 Waa bilaabatay.
15:00 Kubadda dhexda ayay taallaa
14:59 Tartamada kale ee labadan koox ku kulmeen afartii u dambaysay Fulham ayaa ku adkaatay, waxaa Swansea laga dhaliyay ilaa 14 gool isku darka.
14:57 Hadda ayay kooxuhu soo galeen garoonka way isa salaameen iyagoo safay kadibna cayaartoydu garoonka ayay galeen.
14:54 Wigan iyo West Brom ayaa iyaguna cayaaraya maanta.
14:53 Markii ugu dambaysay oo garoonka Craven Cottage ay timid Swansea waxay ahayd sanadkii 1997 markaas oo Fulham ay 2-1 ku adkaatay.
14:51 Waayo labada koox waa isku dhibco.
14:50 Waa cayaar aad u xiiso badan.
14:49 Waxaa lagu cayaarayaa garoonka Craven Cottage ee Fulham.
14:46 Fulham waxay la cayaaraysaa Swansea.